PressReader - Ilanga: 2018-10-29 - IMEYA YASEZULULAND KOLWAMATHENDA
IMEYA YASEZULULAND KOLWAMATHENDA
Ilanga - 2018-10-29 - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA
ITHOLE incwadi mayelana nezinhlelo zokuba iphenywe iMeya yaseZululand, uMfu Thulaziswe Buthelezi ( osesithombeni), ngezinsolo zokuzibandakanya ohlelweni lokukhishwa kwamathenda.
Ngokuthola kweLANGA, ihhovisi likaNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uNkk Nomusa DubeNcube, libhalele usomlomo walo masipala, uMnu Sbu Nkwanyana, ukuba aphenye ngodaba lwemibiko eveza ukuthi mhla ka-18 kuMbasa (April), uMfu Buthelezi uhambele umhlangano wamathenda abezophuma kulo masipala - okuyinto okuthiwa kakufanele ayenze njengemeya.
Lo mhlangano kuthiwa ubumayelana nokukhishwa kwamathenda aphathelene nokwakhiwa kweRudimentary South Water Supply neRudimentary North Water Supply.
Ngokwemigomo kamasipala, kakuvumelekile ukuba ikhansela libe yingxenye yezindaba eziphathelene nokunikezelwa kwamathenda, ama- quotation, yizinkontileka noma ukuhambela imihlangano.
Incwadi emayelana nokuphenywa kwemeya, ithi ngokuka- section 118 (a) (womthetho womasipala), akekho umuntu okumele agxambukele ekusebenzeni kwe- supply chain management system kamasipala.
Kuyona kuvela nokuthi ikhansela kalivumelekile ukuhambela le mihlangano ngaphandle uma lokho kugunyazwe wumthetho.
UNkk Dube-Ncube uthe kuwumsebenzi wabo ukuqinisekisa ukuthi omasipala KwaZulu-Natal basebenza ngendlela eyiyo ukuze kunqandwe inkohlakalo.
“Kubalulekile ukuba labo abakhethiwe balandele yonke imithetho nemigomo yomasipala,” kusho yena.
Uthe lezi zinsolo zinzima kakhulu kanti njengomnyango bayanxusa ukuba uMasipala waseZululand ululandelele lolu daba, uphenye ngaphandle kokwesaba noma ukwenzelela ukuze abantu baseZululand baneliseke ukuthi baholwa ngabantu abalandela imithetho.
Kunemibiko eveza ukuthi uMfu Buthelezi ubizelwe ekomidini eliphezulu leqembu lakhe, i-IFP, ukuba ayochaza ngokuqhubeka kwakhe nokuzama ukuqasha imenenja kamasipala - emuva kokuba kuxoshwe uMnu Sipho Nkosi nonyaka.
Leli phephandaba like labika phambilini ukuthi ngemuva kokuba kukhonjwe indlela uMnu Nkosi, usidlulisele kwi- bargaining council isinqumo sokuxoshwa kwakhe.
Ubebekwe icala lokwehluleka wukuholela izisebenzi zalo masipala ngesikhathi ngasekuqaleni konyaka, okuholele ekubeni kube neziteleka izisebenzi zibhikisha ngoba zinganeme ngalokhu.
Esitatimendeni esikhishwe nguMfu Buthelezi, uthe akanayo nencane inkinga ngokuba aphenywe.
Uthi mhla ka-18 kuMbasa, kuhlasele osomabhizinisi abebehambisana neqembu eliphikisayo, iNFP, besabisa izisebenzi zikamasipala.
“Leli qeqebana belifuna ukunikwa amathenda, laphazamisa nokusebenza kumasipala. Ngihambile namakhansela amabili namaphoyisa ukuyokhuluma nalo ngenhloso yokudala ukuthula.
“Ngiyakwamukela ukuphenywa ngoba ngiyazi ukuthi imiphumela yophenyo izoveza izinhloso zeqembu elibusayo (ANC) okuyilo elifuna ukuphazamisa ukusebenza kumasipala oholwa yi-IFP,” kusho uMfu Buthelezi.
Okhulumela iNFP kulo masipala, uMnu Siphamandla Ntombela, uthe banxusa kube yihhovisi likaNkk Dube-Ncube elizoqoka ikomidi elizophenya imeya.
Kulindeleke ukuba kuqalwe ngesonto elizayo ukuqokwa kwekomidi elizophenya ngalezi zinsolo ezibhekiswe kuMfu Buthelezi.